Qarsoodi khadka tooska ah: Macquul? > Vielhuber David
Qarsoodi khadka tooska ah: Macquul?09
Waqtiyada fadeexada NSA, maahan oo kaliya dadka adeegsada shabakadaha ee isweydiinaya bal sida iyo sida qofku ugu dhex mari karo shabakada si qarsoodi ah si uu uga baxsado xogta xog ururinta ee maamulka iyo adeegyada qarsoodiga ah. Si kastaba ha noqotee, tani waxay badanaa keentaa khaladaad iyo fikrado khaldan. Fikrad khaldan oo udub dhexaad ah ayaa ah yareynta aqoonsi la'aanta qarinta cinwaanka IP-ga.
Waxaa jira xaddidaadyo kale oo kala duwan oo door muhiim ah ka qaadanaya oo keliya shirkadaha xayeysiinta inay aqoonsadaan isticmaaleyaasha: Marka lagu daro cookies-ka, faraha faraha ayaa ka ciyaaraya door dhexe oo isa soo taraya. farriimaha la rakibay. Panopticlick ayaa tan si waadax ah u muujinaya. Waxyaabaha soo socda, waxaan naftayda ku koobi doonaa been abuurka cinwaanka IP-ga waxaanan tusayaa afar qaab oo aan ku qariyo xogtan shaqsiyadeed ee ka imanaya saldhigyada fog:
Wakiilka wakiil: Wakiiladu waxay u dhaqmaan sidii bedel waxayna u diraan taraafikada xogtooda goobta saxda ah. Marka lagu daro wakiillada wakiillada dadweynaha, adeegyo kala duwan sida CheapPrivateProxies waxay bixiyaan wakiillo gaar loo leeyahay. Xaaladaha oo dhan waa inaad kalsooni badan ku qabtaa bixiyeyaasha, kuwaas oo inta badan ku sugan dibedda. Weerarrada-dhex-dhexaadka ah iyo dheriyada malabku waa laba khatar oo keliya oo lagu xusi karo xilligan.
Adeegyada VPN: Kaar shabakad dheeri ah oo dheeri ah, dhammaan (inta badan si buuxda loo duubay) taraafikada xogta waxaa loo gudbiyaa irridda VPN - tani macnaheedu waa si weyn u ilaalin iyo xawaare ka badan kan wakiilka wakiilka, laakiin mar kale waxay kalsooni ku qabtaa bixiyaha VPN sida HIDE .Iio horay u socota. Xaalado badan, oo liddi ku ah ballanqaadyadooda buuxa, bixiyeyaashu waxay u sii daayeen xogta isticmaaleyaasha hay'adaha, waana sababta ay dhammaan xuquuqda jiritaanka u burburaan sida kaararka guryaha.
Wadada basasha: Waqtiyada xafladaha xafladaha 'crypto', tirada isticmaaleyaasha mashruuca Tor ayaa cirka isku shareertay. Marka sidaas la samaynayo, xirmooyinka xogta waxaa la marinayaa saldhigyo badan oo dhexdhexaad ah (node), taas oo iyaduna aan marna garanaynin jidka oo dhan laga soo bilaabo ilaha illaa halka loo socdo. Faa'iido daro: Dhammaan xogta ka gudubta qadka (haddii ay suurtagal tahay in aan la qarin) waa inay dhaafaan noodhka ugu dambeeya, waxa loogu yeero bixitaanka node - tanina wax walba ayey u akhrin kartaa iyadoon ficil dheeri ah la sameyn. Dacwad oogayaasha dambiyada ayaa iyagu soo ogaaday Tor naftooda - waxayna bartilmaameedsanayaan dadka isticmaala.
Mix-Kaskaden: Shirkada kaliya ee caanka ah ee qaabkan qaadata waa JonDonym . Iskudarka cascades waa adeegyo silsilado silsilado ah oo ku kala yaal dalal kala duwan isla markaana uu hubiyey oo uu caddeeyey hawlwadeenka. Si aad ugu dhex gasho qascade isku dhafan waxay la macno tahay in dhamaan qeybaha kasokoliska ay ku hoos jiraan xukunka mas'uuliyiinta, taas oo aan aad u suurta gal aheyn, kaliya maahan kala duwanaanshaha juqraafi ee serverka. Faa’iido darrada ayaa ah qiimaha sare ee isticmaalayaasha gaarka loo leeyahay ay ku bixiyaan adeegga ganacsiga.
Si kooban loo dhigo: aqoonsi la'aan waa macquul. Xitaa haddii aad si xasaasi ah ula dhaqanto adeegyada internetka sida shabakadaha bulshada, weli waxaad ku socotaa internetka oo si otomaatig ah ayaad uga tagtaa raadadka la qiimeyn karo kadib waqti xadidan, xitaa haddii ay yihiin kuwo sir ah. Inkasta oo tallaabooyinka kor ku xusan (iyo gaar ahaan isku-darka) ay ka dhigi karaan raad-raaca mid aad u dhib badan, isticmaaleha Internet-ka ee gebi ahaanba aan la aqoon waa khuraafaad.